सबै को प्रेम — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
सबैलाई माया गर्न चाहन्छ. हामी यसलाई स्वीकार वा छैन कि, हामी सबै राम्रो लाग्यो र अरूले मूल्यांकन महसुस गर्न यो प्राकृतिक इच्छा छ. हामी धेरै कसैले हामीलाई प्रेम गर्न खोज्ने हाम्रो सम्पूर्ण जीवन खर्च, आशा छ कि मा कोही- जो कोहि- भित्र यो तिर्सना पूरा गर्नेछ.
राम्रो तिमी आज रोमान्स आफूलाई गुमाउन योजना हुनुहुन्छ र तपाईं अन्तमा भनेर तिर्सना पूरा छौँ भनेर आशा हुनुहुन्छ भने, म आफ्नो उद्देश्य पनि कम छ भन्ने जान्न चाहन्छु. तपाईं मैनबत्ती प्रकाश खाने राती मा सबै को प्रेम पाउन छैन. तर, त्यहाँ सबै शक्तिशाली छ, सबै सन्तोषजनक, सिद्ध प्रेम उपलब्ध. के तपाईं कहिल्यै कल्पना सक्छ भन्दा बढी प्रेम गर्ने परमेश्वरले त्यहाँ. प्रेम fickle छैन र तपाईंले उहाँलाई woo वा यसको लागि काम छैन.
के परमेश्वरले हामीलाई प्रेम?
मलाई थाहा हामी कहिलेकाहीं धेरै परमेश्वर साँच्चै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि वा आश्चर्य. उहाँले टाढा त देखिन्छ. र शायद हामी उहाँले यो हाम्रो लागि स्पष्ट गर्न केही गरे भने शङ्कालु रोक्न चाहन्छु. सत्य हामीलाई, उहाँले पहिले नै छ. बाइबल यसो भन्छ, "परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हाम्रो लागि हामी पापी छदैं भनेर देखाउँछ, ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो।”
र फेरि भन्छन्, "परमेश्वरको लागि त संसारमा प्रेम, उहाँले आफ्नो मात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँलाई विश्वास छ कि नष्ट तर अनन्त जीवन हुँदैन।”
परमेश्वरको पहिले नै अकल्पनीय तरिकामा हामीलाई प्रेम देखाउनुभएको छ, हाम्रो लागि उहाँको पुत्र दिएर. संसारको इतिहासमा प्रेमको सबैभन्दा ठूलो अभिव्यक्ति अस्वीकार नगर्नुहोस्. आफ्नो प्राण को प्रेमी अस्वीकार नगर्नुहोस्. बरु येशू भरोसा द्वारा प्रेम प्राप्त.
उहाँलाई विश्वास छ जसले हामीलाई ती लागि, त्यहाँ कहिल्यै हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ भनेर संसारमा केही छ. र आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम त ठूलो छ, हामीले केहि कहिल्यै गर्न सक्छन् भनेर उहाँलाई हामीलाई थप उहाँले पहिले नै गर्छ भन्दा प्रेम.
त्यसैले यो प्रणय दिवस मा, हृदय Fam लिन. तपाईं कुनै पनि थप हेर्न छैन. परमेश्वरले तपाईंलाई गहिरो प्रेम गर्नुहुन्छ
Dj Mas वा शिमशोनलाई • अगस्ट 19, 2013 मा 8:37 छु • जवाफ
धन्यवाद यात्रा ली तपाईं परमेश्वरको तपाईंलाई आशिष मेरो जीवनमा साँचो प्रेरणा हो!!!
Violetchirwa • अगस्ट 19, 2013 मा 8:38 छु • जवाफ
त्यसैले tached छु
Carolyn • अगस्ट 19, 2013 मा 8:38 छु • जवाफ
tru कि, मेरो भाइ. अर्को Gen कारण लिइरहेको अप हेर्न राम्रो. परमेश्वरले उहाँलाई लागि आफ्नो क्षेत्र र प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ.
हामी उहाँलाई पालन गर्ने कोसिस रूपमा गरेको एक अर्को लागि प्रार्थना गरौं.
कैथी Washington7 • अगस्ट 19, 2013 मा 8:38 छु • जवाफ
तिमीलाई प्रेम गर्छु, Triplee!!! तपाईंले कहिले comin’ पोर्ट गर्न?????
kayla:) • अगस्ट 19, 2013 मा 8:38 छु • जवाफ
धेरै मन पर्यो:)